Jubbaland oo dalbatay in Ciidanka dowaldda shuruud la’aan uga baxaan Gedo. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Jubbaland oo dalbatay in Ciidanka dowaldda shuruud la’aan uga baxaan Gedo.
Jubbaland oo dalbatay in Ciidanka dowaldda shuruud la’aan uga baxaan Gedo.
Waxa Madaxweynahu uu sheegay in Arimaha amaanka hormar badan laga sameeyay iyadoo Ciidamada iyo Hay’adaha amaanku ay wadaan dadaal adag oo lagu xorayno deegaanada maqan taasna shacabku ay door muuqda ku leeyahiin.
Madaxweynaha oo ka hadlayay dagaalka Al-Shabaab ayaa sheegay in shacabka iyo Dowlada Jubbaland ay ka guulaysan doonan Al-Shabaab loona diyaar garoobayo howlgalo Al-Shabaab lagaga saarayo dhamaan deegaanada ay wali ku harsan yihiin iyadoo sidoo kale la isku farayo dhamaan deegaanada xorta ah Ciidamada Jubbaland ee howlagaladaas fulin lahaana ay diyaar yihiin.
Next articleXukun dil ah oo lagu riday Askari Askari kale dilay